Lauren Spierer အဖြစ် Visited တူဘား
သောကြာနေ့, ဧပြီ 24, 2015 ၏အစောပိုင်းနံနက်နာရီအတွင်း, 22 နှစ်အရွယ် Indiana ပြည်နယ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဟန္န Wilson ကသူမ၏မိတ်ဆွေများကသူမအထဲမှာသွားကြဖို့လည်းမူးယစ်ခဲ့ကြောင်းဆုံးဖြတ်ခြင်းပြီးနောက် Kilroy ရဲ့အားကစားဘားမှာတက္ကစီသို့သူမ၏ထားပြီးနောက်တစ်ချိန်ချိန်ပျောက်ကွယ်သွားသည်။ သူမ၏ခန္ဓာကိုယ်အကြောင်းကိုမိနစ် 30 သူမ၏နေအိမ်ထဲကနေ, Brown ကကောင်တီအတွင်းရှိပြည်နယ်လမ်းမကြီး 45 အနီးတွင် Plum Creek အဘိဓါန်လမ်းကိုပိတ်ထားတဲ့လမျးသှားလမျးလာအားဖြင့် 8:34 pm မှာရှာတွေ့ခဲ့သည်။
ဤတွင်ဟန္န Wilson ကအမှု၌နောက်ဆုံးပေါ်ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုနေသောခေါင်းစဉ်:
နိုဝင်ဘာ 5, 2015 - သေတဲ့အထိတစ်ဦး Indiana ပြည်နယ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားရိုက်နှက်စွပ်စွဲအဆိုပါလူသည်မိမိကာကွယ်ရေးအတွက်ပိုပြီးအများပြည်သူရန်ပုံငွေရှာထားတဲ့အခွင့်အလမ်းပေးတော်မူလတံ့, တရားသူကြီးတစ်ဦးအုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။ ဒံယလေသ Messel ကျွမ်းကျင်သူမျက်မြင်သက်သေများနှင့်ဟန္န Wilson က၏လူသတ်မှုများအတွက်မိမိအစမ်းဘို့ပြင်ဆင်ထားရန်စုံစမ်းစစ်ဆေးဘို့ပိုက်ဆံရှာကြံနေပါတယ်။
ဖြစ်မလုပ်ပဲသူကို Messel, ဆင်းရဲသော သူကျွမ်းကျင်သူမျက်မြင်သက်သေများနှင့်စုံစမ်းစစ်ဆေးငှားရမ်းရန်ခွင့်ပြုမခံခဲ့ရပါလျှင်တစ်ဦးမျှတသောတရားခွင်မှလက်ျာအားလျော့မည်ဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုထားသည်။ အဆိုပါတရားသူကြီး Messel ရဲ့ရှေ့နေများအစိုးရရှေ့နေများ၏ရှေ့မှောက်တွင်နှင့်မီဒီယာထဲကကျွမ်းကျင်သူများ၏လိုအပ်မှုများအတွက်ငြင်းခုန်ခွင့်ပြုပါရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
ယခင်စည်းမျဉ်းများတွင် Messel မူလကဇူလိုင်လအတွင်းစီစဉ်ထားခဲ့သည့်ကသူ၏စမ်းသပ်မှုရဲ့ start အတွက်နှောင့်နှေး, ခွင့်ပြုပေးခဲ့သည်။ ဒါဟာယခုသူ၏ရှေ့နေများပြင်ဆင်ထားရန်အချိန်ပေးဖို့ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းစတင်ဖို့စီစဉ်ထားသည်။
Messel ကိုလည်းမေတ္တာရပ်ခံထားပါတယ် ကွင်း၏ပြောင်းလဲမှုကို ဘရောင်းကကောင်တီ, Indiana ပြည်နယ်ထဲကစမ်းဘို့, ဒါပေမယ့်တရားသူကြီးဂျူရီရွေးချယ်ရေးရာအရပျကိုယူထားပြီးအပြီးသည်အထိကြောင်းအာဏာရနှောင့်နှေး။
Messel ကသူ့ဆဲလ်ဖုန်းသူမ၏ခန္ဓာကိုယ်အနီးရှာတွေ့ခဲ့သည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ 22 နှစ်အရွယ် Wilson က၏ရိုက်နှက်ခန္ဓာကိုယ်ဧပြီလရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်မကြာမီပြီးနောက်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသည်။
Wilson ကလူသတ်မှု Spierer ဖြစ်ရပ်မှန်ဖို့လင့်ခ်လုပ်ထားသော?
ဧပြီလ 28, 2015 - အာဏာပိုင်တွေကသောကြာနေ့မှာ 22 နှစ်အရွယ် Indiana ပြည်နယ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများ၏ပြန်ပေးဆွဲခြင်းနှင့်လူသတ်မှုညဉ့်ကိုသူမအတူတူအားကစားဘားလည်ပတ်ခဲ့သူတစ်ဦး 20 နှစ်အရွယ် IU နဲ့ကျောင်းသားများ၏ပျောက်ဆုံးမှုနှင့်ဆက်စပ်လျှင်ဆုံးဖြတ်ရန်ဖို့ကြိုးစားနေကြတယ် ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့သည်။
ဟန္န Wilson ကပုံသူမ၏မိတ်ဆွေများက Kilroy ရဲ့အားကစားဘားအစောပိုင်းသောကြာနေ့နံနက်မှာတက္ကစီသို့သူမ၏ထားမကြာမီပြီးနောက်ပြန်ပေးဆွဲခြင်းနှင့်သတ်ဖြတ်ခံခဲ့ရသည်။ Lauren Spierer အတူတူ bar မှာသူမကဇွန်လ 3, 2011 တွင်ပျောက်ကွယ်သွားညဉ့်ကိုသူမ၏ဖိနပ်နှင့်သူမ၏ဆဲလ်ဖုန်းထားခဲ့တယ်။
Bloomington ရဲတပ်ဖွဲ့ဗိုလ်ကြီး "ကျနော်တို့ကချိတ်ဆက်မှု၏ဖြစ်နိုင်ခြေရှာဖွေစူးစမ်းနေကြတယ်" ။ ဂျိုး Qualters သတင်းထောက်များကိုပြောကြားခဲ့သည်။
သို့သော် Spierer အမှု၌တစ်ဦးကိုယခင် FBI ကအေးဂျင့်သည်လက်ရှိတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်ဆောင်နှစ်ခုအမှုပေါင်း related ခဲ့ကြသည်လျှင်သူအံ့သြသွားလိမ့်မယ်ဟုပြောသည်။
"link တစ်ခုရှိနိုင်မလားငါရှိတတျနိုငျသဆိုပါစို့," အခုသတင်းအတိုင်ပင်ခံ Brad Garrett ကပြောသည်။ (သူတို့) ထိုဇာတ်လမ်း fit မဟုတ်ဘူးဒါပေမယ့်ငါဖြေရှင်းပေးလိမ့်မည်ဟုဘာမှမှတကယ်ပွင့်လင်းတယ် - သူတို့သေးတကယ်တော့ဆိုရင်ကျနော်မသိရပါဘူး - "ငါဖွံ့ဖြိုးဆဲတယ်သောဇာတ်လမ်းလိုင်းများပေါ်တွင် အခြေခံ. ဆိုရလိမ့်မယ်။ ဤကိစ္စတွင်နှင့် Lauren ကိုရှာဖွေကျွန်တော်တို့ကိုကူညီပေးပါတယ်။ "
Garrett လည်းနည်းနည်းအချက်အလက်များကို Spierer စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအပေါ်ဖြန့်ချိခဲ့ပြီးဖြစ်သောကြောင့်ကကိစ္စနှစ်ခု related လျှင်ဤအချက်မှာဆုံးဖြတ်ရန်ခက်ခဲပါလိမ့်မယ်ဟုပြောသည်။
"ကျွန်မရဲဒီတော့နည်းနည်းသတင်းအချက်အလက်ဖြန့်ချိတဲ့အမှုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းကြပြီမဟုတ်" ဟု၎င်းကပြောသည်။ "ငါသည်သူတို့တစ်တွေအများကြီးပိုသိသင်အာမခံပါသည်။ ကျွန်မသူတို့သူမကပျောက်ကွယ်သွားညဉ့်နှင့်အတူရှိ၏တိုင်းလူတစ်ဦး၏ဆဲလ်ဖုန်းအသွားအလာကြည့်တော့သေချာပါတယ်။ "
သေဆုံး Indiana ပြည်နယ်ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဓမ္မခေါ်ဆောင်,
ဧပြီလ 24, 2015 - တစ်ဦးကအသက် 49 နှစ်အရွယ်လူကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းပြီး 22 နှစ်အရွယ်၏လူသတ်မှုဖြင့်တရားစွဲဆိုထားပြီး Indiana ပြည်နယ်တက္ကသိုလ် သူမ၏ခန္ဓာကိုယ်ကကျေးလက်ဧရိယာထဲမှာတစ်လမ်းအနားမှာရှာတွေ့ခဲ့သည်ရုံနာရီအကြာတွင်ကျောင်းသား။
ဒံယလေသ Messel ဟန္န Wilson က, တက္ကသိုလ်မှာအကြီးတန်း၏ရိုက်နှက်မှုသည်သေခြင်း၌တရားစွဲဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ရဲတပ်ဖွဲ့ Wilson ကနှင့်သူမ၏မိတ်ဆွေများကဟီလ်တန်ဥယျာဉ်အင်းမှာပါတီမှာသောက်သုံးသောကြာနေ့ညဥ့်ကုန်ကဆိုသည်။ သူတို့အကြာတွင် Kilroy ရဲ့အားကစားဘားမှာရောက်ရှိတဲ့အခါသူတို့ Wilson ကဘားရိုက်ထည့်ဖို့လည်းမူးယစ်ခဲ့ကြောင်းဆုံးဖြတ်သည်နှင့်သူတို့တစ်တွေတက္ကစီအတွက်သူမ၏ထားတော်မူ၏။
သူတို့ကသူ့ကိုအငှားသို့အရယာဉ်မောင်းသူမအိမ်လိပ်စာပေးကိုမြင်တော်မူ၏။ တစ်ဦး 9-1-1 ခေါ်ဆိုသူ၏အကြောင်းကို 10 မိုင်တက္ကသိုလ်ကနေရေကန်သံပုရာအနီးသူမ၏ခန္ဓာကိုယ်ရှာဖွေတာကဖော်ပြခဲ့သည်သည်အထိသူမသည်နောက်တဖန်မမွငျခဲ့သညျ။
ဆဲလ်ဖုန်းတစ်ဦးပုံနှိပ်ဆိုင်မှာသောကြာနေ့အလုပ်တက်သည်မပြခဲ့ဘူးသူကို Messel, ချိတ်ဆက်ခဲ့သည့် Wilson ကရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနီးရှာတွေ့ခဲ့သည်ကြောင့်သံသယရှိသူများ၏ဖမ်းဆီးခြင်းကိုလျင်မြန်စွာရောက်လေ၏။ သူကသူ့ပထွေးနှင့်အတူမျှဝေမိုဘိုင်းအိမ်သို့အကြာတွင်ပြန်ရောက်လာသောအခါသူကဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသည်။
သူကအဖမ်းခံရတယ်တဲ့အခါ, Messel သူ၏လက်ရုံးအောက်တွင်အဝတ်တစ်ဦးအစုအဝေးကိုတင်ဆောင်လာသောအိမ်စွန့်ခွာခဲ့သည်။
troopers တစ်ဦးတာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးနောက်အဝတ် Messel ရဲ့ကွန်ပျူတာနှင့်မော်တော်ယာဉ်နှင့်အတူသိမ်းယူခဲ့ကြသည် ရှာဖွေရေးရမ်း ။
တရားရုံးစာတမ်းများအရ, Messel သည်သူ၏ဖမ်းဆီးခြင်း၏အချိန်မှာမိမိလက်ဖျံပေါ်မှာလက်သည်းအမှတ်အသားများရှိသည်ထင်ရှား။ , မိမိအ Kia ၏တစ်ဦးကနောက်ပိုင်းတွင်ရှာဖွေရေးတို့၏အသွေးသည်မိမိ SUV ကားနှင့်သွေး၏ကားမောင်းသူရဲ့ဘက်မှာ splatter နှင့်မော်တော်ယာဉ်များ၏ console ကိုတာရှည်အနက်ရောင်ဆံပင်တစ်ဖုတ်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
Gerald Messel, အပထွေး, Messel မကြာသေးမီကဒေသခံအရက်ဆိုင်ထဲမှာဟန္နအမည်ရှိမိန်းကလေးတစ်ဦးတွေ့ဆုံဖော်ပြခဲ့တဲ့ခဲ့ကြောင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးသို့ပြောသည်။
အဆိုပါ coroner Wilson က 1:30 pm တွင်ခြင်းနှင့်တုံးအင်အားသုံးစိတ်ဒဏ်ရာများ၏ 4:30 pm တွင်အကြားသေဆုံးဟုပြောသည်။
အင်ဒီယားနားပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့သူတို့ရဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးအငှားယာဉ်မောင်း 1 နာရီတွင် Kilroy ရဲ့မှာ Wilson ကတက်ခူးနှင့်အရှေ့ဌမ Street မှာသူမ၏နေအိမ်သို့မှသူမ၏လက်သို့အပ်ကြောင်းဆုံးဖြတ်သည်ဟုဆိုသည်။
Messel ရာဇဝတ်သားစံချိန်ရှိပြီးလေးနက်ခန္ဓာကိုယ်ဒဏ်ရာရစေသေစေတတ်သောလက်နက်နှင့်ဘက်ထရီဘက်ထရီမှအပြစ်ရှိကြောင်းတောင်းပန်ပြီးနောက် 1996 ခုနှစ်တွင်အကျဉ်းထောင်ရှစ်နှစ်ချမှတ်ခံခဲ့ရသည်။
သူဘရောင်းကောင်တီအကျဉ်းထောင်အတွင်းရှိနှောင်ကြိုးမပါဘဲကျင်းပလျက်ရှိသည်နှင့် တရားခွင် ဇူလိုင်လ 22 စီစဉ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ '' ကလေးကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်း '' ဖြစ်ရပ်မှန်
အဆိုပါ GDR အတွက်ခုခံနှင့်အတိုက်အခံ
ကာယဗလလေ့ကျင့်ခြင်းအတွက်ဟိုနှင့် Catabolic ဟော်မုန်း
လေဘယ် Way ကိုမှုတ်သလား
Run ကိုအချိန်မှာ Dynamic အဆိုပါဒေတာဘေ့စ Connection ကို String ကိုတည်ဆောက်ခြင်း
Pirates, ပုဂ္ဂလိက, ခဲ့ကြတယ်နှင့် Corsairs အကြားခြားနားချက်?
Teleology နှင့်ကျင့်ဝတ်: လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့်အကျိုးဆက်များ
နာမည်ကြီး Black ကတီထွင်သူအကြောင်းဘုံဒဏ္ဍာရီ
Bestiality နှင့်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံ, တစ်ဦးကနှောင့်အယှက် Trend
2010 Harley-Davidson ဓာတ်ပုံပြခန်းနှင့်ဝယ်သူလမ်းညွှန်
ဘယ်လိုအရသာရော့ခ် Candy မှ
Citrine ၏ဝိညာဉျရေးရာနှင့်ကုသမှု Properties ကို